प्राकृतिक रुपमा ब्ल्याक हेड्स हटाउने तरिका | Nayashaktionline.com-No.1 News portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment,Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview, International News, Local News, Nepal News, All News, Total News, News, News of Nepal, Our Nepal, Every News, Bhaktapur, Kathmandu, Lalitpur All Nepalप्राकृतिक रुपमा ब्ल्याक हेड्स हटाउने तरिका
Home स्वास्थ्य प्राकृतिक रुपमा ब्ल्याक हेड्स हटाउने तरिका
प्राकृतिक रुपमा ब्ल्याक हेड्स हटाउने तरिका
ब्ल्याक हेड्सले सौन्दर्यलाई फिका बनाइदिन्छ । स–सना कोठी जस्ता देखिने थोप्लाहरुले अनुहारको चमक हटाइदिन्छ । त्यसैले धेरैको निम्ति टाउको दुखाईको विषय हुन्छ, ब्ल्याक हेड्स कसरी हटाउने ? कतिलाई किशोरवयमै यस्तो समस्या देखिन्छ । र, जतिजति उमेर बढ्दै जान्छ उत्तिनै व्ल्याक हेड्स पनि बढ्दै जान्छ ।
यो पहेंलो वा कालो रंगको हुन्छ । खासगरी रोम छिद्र बन्द गर्ने फोहोरको कारण ब्ल्याक हेड्स बन्छ । हर्मोनल परिवर्तन, सौन्दर्य प्रसाधनको प्रयोग, छालाको उचित हेरचाह नहुनु, तनाव आदिले पनि यस्तो समस्या निम्त्याउँछ । ब्ल्याक हेड्स हटाउनका लागि केहि प्रकारका औषधी र क्रिम बजारमा उपलब्ध छ । तर, त्यसलाई प्राकृतिक रुपमै हटाउनु बढी प्रभावकारी हुनसक्छ । यसका लागि अन्त जानुपर्दैन ।
प्राकृतिक रुपमा ब्ल्याक हेड्सबाट हटाउने केहि विधि:
१. कागतिको रस दाग–धब्बा हटाउनमा निकै उपयोगी हुन्छ । यसले ब्ल्याकहेड्स राम्ररी निस्कन्छ । कागतिमा रहेको पोषक तत्व र भिटामिन समेत छालाको लागि फाइदाजनक हुन्छ ।
२. हाम्रो भान्सामा उपलब्ध हुने अर्को वस्तु हो दालचीनी, जो ब्ल्याक हेड्स हटाउन उपयोगी हुन्छ । यसका लागि कागती र बेसार पनि आवश्यक हुन्छ । यी तीनै चिज मिश्रण गरेर अनुहार सफा गर्नुपर्छ ।
३. ओट मिल तथा दहीको मिश्रणको पेस्ट तयार गरौं । यसलाई अनुहार तथा नाखमा राम्ररी लगाउनुपर्छ, ब्ल्याकहेड्स हट्छ ।
४. ब्ल्याकहेड्स हटाउनका लागि बेकिङ सोडा राम्रो उपाय हुनसक्छ । यसले अनुहारको फोहार मैला राम्ररी हटाइदिन्छ । साथै सुक्ष्म प्वालहरुमा जमेको मैला समेत यसले हटाइदिन्छ ।